Shilalkii Oo Soo Badanaya Maxaa Sabab U Ah Talaw? – WARSOOR
Beryahan dambe waxa so badanaya shilalka gawaadhida taasoo la odhan karo waxa sabab u ah darawal xumo dadka haysata iyo gaadiidkii oo aan iskuulo loogaso baxayne layska fuulayo uun caruur iyo ciroolaba.
Da’yarta ama caruurta da’doodu udhaxayso 15-20 ayaa iyagu aad ujecel inay kaxaystaan gawaadhida kuwaasoo laga kiraynayo wax damaand ahna aan la weydiinayn oo lacagtuun laga qaadayo masuul ka gadhiguna aanu gadhi giisaba hoos u eegayne uu lacagtuun urursanayo isagu. waa ta sababtay shilalkan dhacaya maalin walba.
Inkastoo wax walba qadarka alle ku dhacaan hadana waxa la odhan karaa ciidanka amaanka wadooyinka ee taraafikada ayaa iyaguna ah qaar aan hawshoodii ufirfircoonayn sifiicana ugudanayn haday noqoto dadkii gaadiidka watay oo aan lala xisabtamayn liisanna la weydiinayn laguna adkaynayn sharciga dalka halka caalamka liisanku yahay sharciga ugu adagee qofku qaato.
Hadaan u imaado qodoba sadexad anoo hadalka so kobaya waxan donaya inan kaga hadlo wadooyinkeenii oo dhimaad ah dhamaantood roobabkuna ay kashifaan xiliyada roobabku da’aan. Kuwaas oo noqda wada god iyo ceel miidhan gawaadhidana ku keena inay cimri dagdagaan amaba duugoobaaan dawlada hoose shaqadeedi weeye runtii inuu gaabis jirana way iska caday.
Waxad moodaaba inaanay garanayn waxay yihiin iyo waxay mesha ujoogaan iyo waxa loo kensaday iyo waxay ka shaqaynayaan waxay tahay shaqadoodiiba garan maayaan.
Intaasaan kusoo koobayaa wabilaahi tawfiiq.